Uyini umehluko phakathi kwe-HDMI2.1 ne-HDMI2.0? - I-Connexions Technology (Dong Guan) Ltd.
Uyini umehluko phakathi kwe-HDMI2.1 ne-HDMI2.0?
Uyini umehluko phakathi kwe-8K HDMI2.1 ne-4K HDMI2.0?
Umehluko osobala kakhulu phakathi kwalezi zindinganiso ezimbili yi-bandwidth. Umthamo womkhawulokudonsa wamanje we- I-HDMI 2.0 4K ngu-18 Gbps, ngenkathi I-HDMI 2.1 8K isebenza ngezinga lama-48 Gbps. Lokhu kukhuphuka komkhawulokudonsa kuvumela i-HDMI 2.1 ukuthi idlulise imininingwane eminingi, futhi kusho ukuthi isithombe esidluliswa nge-HDMI 2.1 sizoba nesinqumo esiphezulu. Namazinga aphezulu ozimele.
Ama-TV amaningi aphakathi nendawo kuya phezulu anikezela okungenani itheku elilodwa le-HDMI 2.0. Uma uthenge i-TV eminyakeni embalwa edlule, itheku le-HDMI ngokuyisisekelo lingu-2.0a noma u-2.0b noma liphansi kakhulu. Njengoba umehluko phakathi kuka-2.0a no-2.0b mncane, sizoxoxa ngqo ngomehluko phakathi kuka-2.0 no-2.1 namuhla.
Synthesizing various data, we can see that the most obvious difference between the two standards is bandwidth. The current bandwidth capacity of HDMI 2.0 ngu-18 Gbps, ngenkathi HDMI 2.1 runs at 48 Gbps. This increase in bandwidth enables HDMI 2.1 to transmit more information, and it also means that the images transmitted via HDMI 2.1 will have higher resolution and higher frame rates.
Kubalulekile ukusho ukuthi abadlali bamageyimu bangaba ngabokuqala ukuzwa izinzuzo ze-HDMI 2.1, ngoba abathuthukisi abaningi bemidlalo sebevele bekhuthaza imidlalo ye-4K kuma-FPS ayi-120.
I-HDMI 2.1 inezinye izinzuzo eziningi. Isibonelo, i-HDMI 2.1 isekela okuqukethwe kwe- "Dynamic HDR", evumela ukulungiswa kokuqukethwe kwemethadatha ye-HDR ngesisekelo sohlaka-ngohlaka. I-HDMI 2.1 nayo inomsebenzi we-eARC, okuyisiteshi sokubuyiswa komsindo esithuthukisiwe esingadlulisa amasignali womsindo wekhwalithi ephezulu ngezintambo ze-HDMI. Ngaphezu kwalokho, i-HDMI 2.1 nayo inezinga lokuvuselela okuguquguqukayo (VRR) nemisebenzi yokudlulisa ifreyimu esheshayo (QFT), le misebenzi emibili inganciphisa ukubambezeleka futhi ingaqeda ngokuphelele ukubambezeleka kokufaka.
Ungadinga futhi ikhebula le-HDMI 2.1
Njengamazinga amaningi we-interface, uma ufuna ukujabulela insizakalo ephelele enikezwa yi-HDMI 2.1, udinga nekhebula elisha sha le-HDMI 2.1, ngoba ikhebula le-HDMI 2.1 48G nomthombo wesiginali uhlukile kune-HDMI 1.4 / 2.0 yamanje, futhi abakhiqizi badinga Kusetshenziswa izindlela ezintsha zokukhiqiza, i-HDMI Forum nayo idinga ukwethula uhlelo olusha lwesitifiketi ukuqinisekisa ukuthi ikhebula lingasebenza ngokujwayelekile ngejubane eliphakeme futhi lisekele zonke izici. Izindaba ezimnandi ukuthi kungekudala nje, eminye imithombo yezindaba ithe i-HDMI Forum isizoqedela ukunikezwa isitifiketi kochungechunge lokuqala lwezintambo ezihambisanayo ze-HDMI 2.1, futhi sizobona izintambo "ezisemthethweni" ze-HDMI 48G ngaleso sikhathi.
Uyini umehluko phakathi kwe-HDMI 2.1 ne-HDMI 2.0? Izindinganiso eziphakeme kufanele zibe zinhle?
Akungabazeki ukuthi i-HDMI 2.1 izoshintsha indlela esibuka ngayo futhi sikujabulele okuqukethwe, noma ngabe ngama-movie, imidlalo noma izinhlelo zokusakaza ze-TV. Kepha okwamanje, ngokungabikho kokuqukethwe kwekhwalithi ephezulu kakhulu, abathengi abaningi abadingi ukulandela i-HDMI 2.1 ejwayelekile kakhulu. Izintambo ze-HDMI 2.0 zanele ezimweni eziningi.
Ukwethulwa kwamakhebuli amaningana asetshenziswa kakhulu ekubhekeni nasekuvikelekeni
Umehluko phakathi kwesikhombimsebenzisi sombani we-Apple nohlobo C lwe-USB